Aartii Oromoo: Inistitiyuutiin Aartii Oromiyaa maal milkeessuuf kaayyeeffate? - BBC News Afaan Oromoo
Aartii Oromoo: Inistitiyuutiin Aartii Oromiyaa maal milkeessuuf kaayyeeffate?
Inistitiyuutiin Aartii Oromiyaa tibbana magaalaa Adaamaatti hundaa'e, eebbifamuun hojii eegaleera.
Dhaabbatichi sirna Gadaa Oromoo barsiisuufi hojii aartiifi aadaa sadarkaasaa eeggate uummatatti akka dhiyaatu hojjechuu akka kaayyeffateera.
Hojii gaggeessaan Institiyuutichaa Beenyaa Dhaabaa BBCtti waan jedhe, ''Kana dhugoomsuuf inistitiyuutichi leenjii qulqullina qabu hojiilee aartii gita kamirrayyuu jiraniif kennuufi piroodaakshinii hojii aartii guutuu hojjechuun uummataaf ni dhiyyeessa,'' jedheera.
Meeshaa barbaachisoo biyya alaarraa fideefi hayyama hojiii kana dalaguuf barbaachisu akka guuttate gaggeessaan Insititiyuutichaa BBCtti himeera.
Leenjii Sirna Gadaa
Leenjii fi barnoonni xiin-sammuu aartistootaa jabeessuufi aadaa fi afaan Oromoo irratti xiyyeeffatees ogeessotaan ni kennama jedhameera.
''Leenjiiwwan kennaman keessaa sirni Gadaa akka barnoota tokkotti kennama.
Sirna Gadaa irratti tiyaatirri, fiilmiif dokimantariin sadarkaa idila addunyaa qabu hojjatamuu qaba, sirbamuufi qaba.
Kanaaf institiyuutichi leenjii adda tahan kunneen namoota aartii Oromiyaarra jiraniifi ogeessota beekumsa kanaa qabaniin ni kenna.
''Namoota kana dura kaka'umsa mataa isaaniitiin aartii hojjechaa turan ogummaadhaan akka hojjetan deeggaruun aartii Oromoo gara sadarkaan addunyaan irra gaheetti ceesisuuf institiyuutii hundaa'e dha.
Kana malees Afaan Oromoo waggoota 27 darban keessatti gama barreeffamaan ammas hanqinni baayyee ijaa mul'atuuf kana foyyeessuuf leenjii ni kennina.
Faayinaansii fi Aartii Oromoo
Dhimmi Oromoo aartii waliin hidhata qabus haa tahu kan hin qabne karoorfamee karaatti kan hafe baayyee dha kan jedhu Beenyaan,
''Abbootiin qabeenyaa Oromoo illee dhiibbaa duraan irra gahaa turee sodaa qabaachuu malu,'' jedha.
Isa kana nuti cimnee itti deemuun hubannoo kennuun nurraa eegamas jedheera.
''Gama mootummanis rincicummaan hanguma jiru warreen aartii Oromoo deeggaruuf fedhii qaban immoo jiru.'' Isaaniin qabannee warreen aarticha fuuldura dhaabbtanittii immoo ni qabsoofna jedheera Beenyaan.
Leenjiin kennanis ulaagaa sadarkaa garaagaraa barnoota gaafatuufi fedhii qabaachuun warqaaa ragaan qofa ni kennama jedheera.
Rakkoo faayinaansii kana dura tureen dabalata aartii Oromoo irratti qollifannaan akka tureefi aartiin biyyichaa gara tokkootti kan luucca'e ture.
Image copyright Oromia Art Institute
''Daldalaafi qonnaan bulaan qabsoorra ture. Carraa amma uumametti fayyadamuun, uummataafi qabeenya Oromiyaan qabdu qabatanii sadarkaa addunyaan gaherraa gahuu,'' akka fedhan hima.
'Oromoon namoota ogummaa qaban hedduu barbaada'
Namoota eebba institiyuutichaa dhuma torbee dabarsine kanarratti argaman keessaa, gaazexeessaa fi barreessaa kan tahe Fiqaaduu Daadhii waan jedhe, inistitiyuutin kun banamuu isaatiin ''ni leenjiina, ogeessota biraa wajjin bakka wal-geenyaa tahaa, muuxannoos wal-jijjiirraa gochuun saayinsiin fiilmii maal jedhaa? waan lafarra jiru immoo maali kan jedhu wal-simsiisfnee deemuf bu'aansaa guddaa dha,'' jedha.
Dhaabbatichi eenyu dandeetti maalii qaba isa jedhuuf ogeessoti akka wal baraniif iddoo wal-geenyaati jedheera gaazexeessaa Fiqaaduun.
''Eebbifamuun dhaabbata kanaa faayidaa guddaa qaba. Aartiin Oromoo bal'aadha. Seenaa dheeraas qaba. Seenaa guddinaa fi hacuuccaa of keessatti qaba" jedhu hogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Garramoo Hulluuqaa (PhD).
Goodayyaa suuraa Meeshaa barbaachisoo biyya alaarraa fideefi hayyama hojiii kana dalaguuf barbaachisu guuttateera
Bifa ammayaawaa ta'eefi leenjii kennuu keessatti hanqinni jira waan ta'eef institiyuutiin kun aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee guddaa qaba,'' jedhaniiru.
Kana malees, institiyuutiin kun Oromo Art School Finfinneerra yeroo dhihootti hundaa'uuf galtee guddaa fi ka'umsa taha waan taheef, akka hojii ijootti ilaaluun akka deeggaranis dubbataniiru.
Hundeessaa Institiyuutii Aartii Oromiyaa keessaa tokko kan tahe Gammadoo Jamaal immoo ''Oromoon namoota ogummaa qaban hedduu isaan barbaachisa, kanaaf mana barumsaa kana banne,'' jedha
Institiyuutiin Aartii Oromiyaa ni barsiisa, barnoota aartii irrattii xiyyeefatu 32 kennuuf akka kaayyeffate dubbata Gammadoon.
Institiyuuticha hundeessuuf maallaqni gara miiliyoona 7 gahu itti baheera, firiinsaa immoo yeroo dheeraan booda waan mula'atu dha, jedheera.
Kaayyoo Institiyuutii Aartii Oromoo
''Gara fuulduraattti waltajjii sadarkaa isaa eeggate qopheessuun xiin-sammuu uummata keenyaa dadammaqsuu kaayyeffanneerra,'' jedha Beenyaan.
''Bu'uurri dorgommii keenyaa illee haala aartiin biyyi kuni irra jiru otoo hin taane, kan biyya alaatti bira qabneetu hojjechaa jirra.
Institiyuutichi waggaa tokko keessatti FM fi televizyinii aartii Oromoo irratti xiyyeeffatu banuuf yaada qaba''.
Odaa Awaardii: Badhaasaan hojiiwwan artii Oromoo dorgomaa taasisuuf